आजको तस्वीर : गुल्मी वामीको नौमती बाजा महोत्सवमा जे देखियो ! | ebaglung.com
आजको तस्वीर : गुल्मी वामीको नौमती बाजा महोत्सवमा जे देखियो !
२०७५ कार्तिक ५, सोमबार १९:०१	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
शव्द/चित्र : कमल पौडेल,
गुल्मी वामी २०७५ कात्तिक ५ । मुसिकोट नगरपालिकाको वामी टक्सारमा दोश्रो नौमती बाजा महोत्सब शुरु भएको छ । वामी बिश्व सम्पर्क मञ्चले गत २०७२ सालको मँसिर तेस्रो साता प्रथम पटक नौमती बाजा महोत्सब आयोजना गरेको थियो । यसैक्रममा मन्चले दोस्रो पटक नौमती बाजा महोत्सब आयोजना गरिएको मञ्चका संस्थापक समेत रहेका कार्यक्रम संयोजक बैकुण्ठ रायमाझीले ईबागलुङलाई जानकारी दिए । महोत्सबमा गुल्मी र बागलुङ जिल्लाका गरी सात नौमती बाजा टोलीले भाग लिई रहेका छन् । महोत्सब भोलि पनि जारी रहने छ ।
महोत्सवमा प्रथम पुरस्कार ३३ हजार ३ सय ३३, व्दितीय पुरस्कार २२ हजार २ सय २२, तृतिय पुरस्कार ११ हजार १ सय ११ रुपैया रहेको छ । त्यसैगरी उत्कृष्ट सहनाई बजाउनेलाइ प्रोत्साहन स्वरुप ५ हजार ५ सय ५५ रुपैया प्रदान गरिनेछ । अहिले पञ्चेबाजामा नृत्य प्रतियोगीता पनि आयोजना गरिएको छ ।
१५ हजार ५ सय ५५ रुपैया प्रथम पुरस्कार, १० हजार १ सय ११ व्दितिय पुरस्कार तथा तृतिय पुरस्कार ५ हजार ५ सय ५५ रुपैया दान गरीने छ । त्यसैगरी पुरुषको पञ्चेबाजा नृत्यमा पनि सोही अनुसारको पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ ।
ढोरपाटनको आलु र स्याउले बजार ओगटे पछी बुटवल र अन्यत्रबाट आलु आयात हुन छाड्यो !